SomaliTalk.com » Dallada Haweenka (KWDON) oo Sameysay Wacyi gelin ku sabsan HIV/AIDS.
Dallada Haweenka (KWDON) oo sameysay Wacyi gelin ku sabsan HIV/AIDs Waxayna ka sameysay Schoolka Imamu-Nawaawi ee Magaalada Qardho Schoolkaas oo Wax lu baro Haweenka Aan waxna Qorin waxna Akhrin.
Guddomiyaha Dalada Haweenka G/karkaar Ubax Saciid Daahir ayaa Fahfahisay khatarta u leyahay Cudurka HIV/AIDS waxa ay sheegtay in cudurkaan u aafeyay adduunka lona bahan yahay in laga digtonaado, waxaay kalo sheegtay siyabaha lagu kala qado Cudurkan HIV/AIDS sidoo kale waxay sheegtay in cudurkaani u leyahay ka hortag lakiin usan laheyn Daweyn.
Wacyi gelinta sidoo kale waxaa lagu sameyay Camp Shabelle oo ay degan yihiin qaxootiga kasoo bara kacay Konfurta Soomaaliya.
Sidoo kale Daladu waxay ka Wacyi gelin u sameysay Barakacayaasha aan hesan Goobo Cafimaad ay ku xirnadaan waxay kaloo Guddomiyuhu sheegnay qataraha Cudurkan uu leyahay in Cudurkan qof kastana u ku dhici karo ayna u nugul yihiin Dadka Qaxootiga ah oo aan waxba ka Aqoon dhibatada Cudurka Dilaga ah ee HIV/AIDS.